Shrimp Scampi Recipe | Couple yeMugwagwa
Shrimp Scampi chihwitsi chakakurumbira muAmerican icho chakavakirwa patsika yeItaly yekubika Scampi, ayo ari madiki crustaceans anotaridzika zvishoma kunge madiki mashanga. MuItari, tsika yave iri yekuvabika nemafuta emuorivhi, gariki, hanyanisi uye waini chena. Nyore, ndizvo?
Shanduro yekare yeItaly-American yakafanana, kunyangwe kudana kwacho kwakatosiyana. Kutora echinyakare, sautee recipe uye yakachinja shrimp ye scampi (kana langoustines, sezvavanodaidzwawo), vabati vekuItaly-bred muNyika Nyowani vakangochengeta mazita ese - vachitipa Shrimp Scampi.
Chikafu chinokurumidza uye chinonaka chinogona kubikwa mune yakawanda nzira. Kunyanya kufarirwa, chigadzirwa cheSampampi chakapedzwa chinodonhedzwa chakabikwa ne spaghetti noodles for a light and airy pasita dish. Nekudaro, iwe unogona zvakare kurasa Scampi nemiriwo, mbatatisi, kana kungodya shrimp scampi pachayo!
Edza iyi yekubheka kumba, uye utiudze kuti iko kududzira kunomira sei!
Servings: 4 vanhu
1 1 / 2 paundi jumbo shrimp mashedhi uye kushambwa
Kosher munyu uye uchangobva pasi dema pepani
2 tablespoons unalted batare
2 teaspoons minced gariki
1 / 4 mukombe yakaoma chena vermouth
1 mupuni inonyorerwa muto wemononi
2 teaspoons yakatemwa zvakapetwa-gwenzi mashizha eparsley
1 / 4 teaspoon grated ndimu zest
Isa shrimp pane hari pie hombe kana mundiro uye patse navo yakaoma zvachose netauro pepa. Rongedza shrimp kuti igare pasi uye yakarukwa yakaenzana.
Pisa hukuru skillet pamusoro wepakati kupisa. Mwaka we shrimp nemunyu uye pepper. Wedzera bhotela kune skillet. Kana iyo miratidziro ichiderera, simudza kupisa kumusoro, uye bvisa ndiro ye shrimp pamusoro pani kuitira kuti shrimp iwire mupoto yose kamwechete. Bika shrimp, pasina kuvasunudzira, kweminiti ye1. Wedzera gariki uye bika ye1 miniti. Shandura shrimp pamusoro uye bika ye2 maminetsi akawanda. Chinjana shrimp kumudzi.
Dzorera skillet kumoto kupisa uye mudururire mu vermouth uye mandimu. Bika iyo iyo mvura kusvikira zvishoma ikakora, anenge 30 masekondi. Dhirowa mabheti chero akaomeswa kubva pasi pegango nehupuni hwehuni. Dhirowa zest uye parsley mune sosi. Dururira muto pamusoro pe shrimp, mwaka ne munyu uye pepper kuti kuravira uye kurasa kusanganisa.
Govanisa shrimp pakati pemahwendefa e4 kana kurongedza pasita uye kubatira.
Category: American, Europe, Food uye Drink, Italian, Itari, Low Carb, Zvakakosha, North America, Recipes Tags: American, ChiItalian, Recipes, shrimp scampi
← 5 Inofanirwa-Shanya Nyika Dzakanakaina Mifananidzo Mabhichi
4 Spectacular yeAustralia Island Kuparadza Iwe Unongotadza Kupotsa →